အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးမှု
Muslim Luyechuns or Outstanding Students »
Source: FB of Mohammed Bilarl Rangooniအစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဝါ Transparency ကို ယနေ့ကာလ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး နယ်ပယ်များတွင် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပဲ ပြောလာကြသည်။ အစ္စလာမ်ကိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဟု ရမ်းတုတ် မှန်းအုပ်လာကြသည်။ ဗမာစကားပုံ တစ်ခုရှိသည်။ သတိမမူ ဂူမမြင်၊ သတိမူက မြူပင်မြင်သည်။
တောထဲမှာ မိမိသွားနေသောနေရာသည် လမ်းမဟုတ်ဘဲ၊ တောကောင်နေထိုင်သည့် ဂူဖြစ်နေသည့်အတွက် နောက်ဆုံး တောကောင်အစားခံလိုက်ရခြင်းကို ပမာပြဆိုထားပေသည်။ သတိထားပါလျှင် သေးငယ်သော မြူနှင်းများကိုပင် မြင်နိုင်၍ အချိန်၊ နေရာတို့ကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ထိုစကားပုံအတိုင်းပင် ဗမာလူမျိုးတို့သည် သတိမမူ၍ အစ္စလာမ်ဘာသာကို မမြင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာက ကမ္ဘာ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အရှိဆုံး ဘာသာတရားဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးဝတ်ပြုမှုအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တစ်နေ့ ငါးကြိမ် နှိုးဆော်ရသည်။ အရဗီဘာသာဖြင့် သံတော်ဆင့်ရသည်။ ထိုနှိုးဆော်သံတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ ကိုးကွယ်သော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကြီးမားမြင့်မြတ်မှုကို ထုတ်ဖော်ရသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ယုံကြည်ချက် စာသားကို ထုတ်ဖော်ကြေညာရသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ နှစ်ဘဝကျေးဇူးတော်ရှင် ခေါင်းဆောင်မွန်ဖြစ်တော်မူသော တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ်သခင် (PBUH) သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာရသည်။ အထက်ပါအချက်များကို မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံရသည်။ မြန်မာလို ဘာလို့ သံတော်မဆင့်သလဲဟု အမေးရှိပါက ငါးပါးသီလကို မြန်မာဘာသာဖြင့် မယူဘဲ ကုလားလို ပါဠိဘာသာဖြင့် ယူသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်ဟု ဖြေရမည်ဖြစ်သည်။ ငါးပါးသီလ ဘာလဲသိချင်ရင် ပါဠိမှ မြန်မာပြန်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို မေးရမည်။ မမေးမြန်းဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဟုပြောပါက မမေးသူ၏ အပြစ်ဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို သိချင်ပါက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ကို မေးမြန်းရမည်။ မမေးဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဟု ပြောလို့မရပေ။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ တစ်နေ့ ငါးကြိမ် စုပေါင်းဝတ်ပြုသော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များထဲသို့ ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းသူ အမျိုးသားမှန်သမျှ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသည်။ အချို့ ဗလီများတွင် သန့်ရှင်းသူ အမျိုးသမီးများပါ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဘာသာ၊ လူမျိုး မခွဲဘဲ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ စည်းကမ်းတော့လိုက်နာရမည်။ ဖိနပ်ချွတ်ရမည်။ လေးစားမှု ၊ ရိုသေသမှုဖြင့် လေ့လာနိုင်သည်။ ဒါကို မလေ့လာဘဲ အိမ်ကနေ ထိုင်အော်နေလို့ကတော့ အော်သူ့ အပြစ်သာ ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ ဦးထုပ်ဆောင်း၊ အင်္ကျီရှည်ဝတ်ကာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သောကြာနေ့ ဗလီတက်ကြသည်။ အချို့ သူတို့သည် ထိုအခြင်းအရာကိုမြင်မှ ဒီနေ့ သောကြာနေ့ပါလားဟု အမှတ်ထားမိသည်။ သိလိုပါက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို မေးမြန်းရမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ရှင်လောင်းလှည့်ခြင်းကို ဘာ့ကြောင့်လဲ သိလိုပါက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကို မေးမြန်းရသလိုပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလိုနေလာပြီးမှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဟု ပြောလျှင် ပြောသူ့အပြစ်သာဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသားတို့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မုတ်ဆိတ်ထားကြသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ကျင့်သုံးနေလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကဲ့သို့ မုတ်ဆိတ် ပြောင်အောင်ရိတ်ကြမည်။ သိလိုလျှင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို မေးမြန်းရမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဘုန်းကြီးဝတ်လျှင် ဦးခေါင်းတုံးသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ မသိချင်လျှင် မမေးနှင့်။ သိလိုလျှင် ဆရာတော့်ထံ သွားလျှောက်ရမည်။ မမေးဘဲနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဟု စွတ်မအော်သင့်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ဥပုသ်လရောက်ပြီဆိုလျှင် တစ်နိုင်ငံလုံး လှည်းနေလှေအောင်း၊ မြင်းဇောင်းမကျန်၊ ပျိုအို၊ ကျားမ၊ နုရွ၊ ပုကွ မရွေး အလွှာစုံ၊ အတန်းစုံတို့ သိကြသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ ဥပုသ်ကို ဘယ်လိုစောင့်ရသလဲဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုလည်း သိကြသည်။ တကယ်ဆိုလျှင် ဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိချေ။ ကိုယ်ဥပုသ်စောင့်ထားတာကို ဖွင့်မပြောမချင်း တပါးသူ မသိနိုင်ချေ။ ဖွင့်ပြောမှသာ သိနိုင်သည်။ ဆိုင်ထိုင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေရင်း ဥပုသ်စောင့်နေနိုင်သည်။ မည်သူမျှ သိမည်မဟုတ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ဥပုသ်စောင့်ရန် မည်သည့် ဘာသာရေးဆရာတော်တစ်ဦးဦး၏ ဥပုသ်တိုင်ပေးရန်လည်းမလို။ မည်သည့် သီးသန့် အဝတ်အစားကိုမျှ လဲလှယ်ရန်မလို။ ကိုယ့်စိတ်နှင့် ကိုယ့်ကိုယ် တစ်ဦးတည်းသာ သိသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ ဒီလို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သော ကိစ္စတောင် ဘာသာခြားတွေ အားလုံးသိသည်ဆိုလျှင် အစ္စလာမ်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဟု စွပ်စွဲချက်များသည် ယုတ္တိရှိပါဦးမည်လော။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့အနက် ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတို့သည် သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ဟိဂျားဇ်နယ် (ဆအူဒီအာရဗ်) ရှိမက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော်သို့ သွားရောက်၍ ဟဂ်ျ ခရီးထွက်ကြရသည်။ ဟဂ်ျသည် ဘုရားဖူးခရီးမဟုတ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဘုရားဖူးခရီးဟု အမည်တပ်ပေးထားသည်။ ရှိစေတော့။ ဟဂ်ျဟူသော ကျင့်စဉ်သည် မည်မျှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသနည်းဆိုသော် အမျိုးသားအားလုံး ချုပ်ရိုးမပါသော အဲဟ်ရာမ်ခေါ် ဝတ်စုံကို ပုံစံတစ်မျိုးတည်း ဝတ်ရသည်။ သံရုံးများ၊ လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းကောင်တာများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဟာဂျီများဖြင့် စည်ကားနေသည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လေယာဉ်၊ သင်္ဘောများဖြင့် တောင်ပြိုကမ်းပြို လာကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှလည်း တစ်လုံးတစ်ခဲ သွားကြသည်။ ဘယ်လောက်တောင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသလဲဆိုလျှင် ဟာဂျီ ဂုဏ်ပြုပွဲတွေကို အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင် တက်ရောက်သည်။ အားပေးသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ဟဂ်ျ ကျင့်စဉ်ကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်လို့ရပါသလော။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဘိုးတော်များ ဖြေကြပါကုန်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ အီးဒ်နေ့များကို လေ့လာပါ။ အီးဒ်နေ့နံနက်ဆိုလျှင် ဦးထုပ်ဆောင်း၊ ခေါင်းပေါင်းပတ်၊ အင်္ကျီရှည်ဝတ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ မိုးမလင်းခင်ကတည်းက ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များသို့ သွားရောက်နေသည်ကို တွေ့ရမည်။ လူကြီးလူငယ် အသွယ်သွယ်သည် ဖြူလွင်တောက်ပသော ဝတ်စုံများကို ဝတ်၍ မိမိတို့ရပ်ကွက်ဗလီသို့လည်းကောင်း ၊ အီးဒ်နေ့ စုပေါင်းဝတ်ပြုရာ အမိုးမပါသော အီဒ်ဂါဟ်ခေါ် ကွင်းပြင်များသို့လည်းကောင်းသွားနေကြသည်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အီးဒ်နေ့ကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ကျင်းပလို့မရပေ။ အစ္စလာမ်ဘာသာသည် ကမ္ဘာ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အရှိဆုံး ဘာသာဖြစ်ပေသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ပြုမူကျင့်ကြံရသော အပြုအမူများ မရှိချေ။ ဘာသာခြားတို့ မသိအောင် ဘာလေးတော့လုပ်လိုက်ပါဟု ခိုင်းထားတာမရှိ။ ဘယ်လောက်အထိပွင့်လင်းမြင်သာရှိသလဲဆိုရင် တစ်နေ့ငါးကြိမ်ဝတ်ပြုမှုကို ပြုလုပ်ရန် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များတွင်သာမက သန့်ပြန့်သော မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဝတ်ပြုခွင့်ပေးထားရာ မီးရထား၊ လေယာဉ်ပျံ၊ သင်္ဘော၊ စသည့် အစီးအနင်းများအပေါ်တွင်သာမက ပန်းခြံ၊ မြေပြန့်ကွင်းပြင်၊ ဘူတာရုံ၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ် စသည်တို့ရှိ သန့်ပြန့်သော မည်သည့်နေရာတွင်မဆို သန့်ပြန့်သော အခင်းတစ်ခု ခင်း၍ ဝတ်ပြုနိုင်ပေသည်။ သင်သည် ကမ္ဘာလှည့်ဖူးသူ ဖြစ်က ထိုအတိုင်းတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုဝတ်ပြုမှုကိုလည်း မည်သို့မျှ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ပြုလုပ်လို့မရပေ။ စိတ်ဖြင့် ဝတ်ပြုခြင်းသည် တရားမဝင်ဘဲ ကျန်းမာရေးကောင်းသူအဘို့ ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ ဦးညွှတ်ခြင်း၊ ဦးချခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း စသည့် လေးမျိုးသော အခြေအနေဖြင့် ဝတ်ပြုရလေသည်။ ထို့ကြောင့် ပွင့်လင်းမြင်သာ အရှိဆုံးသော ဝတ်ပြုနည်း ဟုပင် ခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဝတ်ပြုနေပုံကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ထိုသူသည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ကြောင်း ပွင့်လင်းမြင်သာရှိပေသည်။ မည်သည့်ဘာသာတရားမှာမျှ မရှိသော အချက်တစ်ခုမှာ ဝတ်မပြုမီ ကိုယ်လက်သန့်စင်ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အားလုံးအတွက် ဝတ်မပြုမီ ကိုယ်လက်သန့်စင်ရေးနည်းလမ်းမှာ တစ်မျိုးတည်းပင် ဖြစ်ပေရာ ထိုအရာကြောင့်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဖြစ်လာပေတော့သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာသော အခြားကိစ္စများ အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ရှိပါသေးသည်။
ယခု ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိနိုင်သော အစ္စလာမ့်ကျင့်စဉ်အနည်းငယ်ကို တင်ပြပါမည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုစိုက်ရသည်။ လက်သည်းခြေသည်းများကို တစ်ပတ်တစ်ခါ ညှပ်ရသည်။ ချက်အောက်နှင့် ချိုင်းမွေးများ မထားရှိရပေ။ ဇနီးမောင်နှံ ကာမဆက်ဆံပြီးချိန်တွင် ရေချိုး၍ သန့်ရှင်းမှုယူရသည်။ ခင်းကြီး၊ ခင်းလေးသွားပြီးလျှင် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးမှ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကို ထိကိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ ဝတ်ပြုခွင့်ရှိသည်။ ကောက်ရသောပိုက်ဆံ-ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်ရှာ၍ပေးရသည်။ မတွေ့လျှင် သုံးရက်ကြေညာရသည်။ ပိုင်ရှင်မပေါ်လျှင် လှူပစ်ရသည်။ ဝယ်သူက ဝယ်ယူပြီးမှ မကြိုက်လို့ အချိန်မရွေး ပစ္စည်းပြန်ပေးလျှင် အကောင်းအတိုင်းရှိနေပါက ငွေပြန်အမ်းပေးရသည်။ အနာအဆာကို ဖုံးကွယ်မရောင်းရပေ။ အိမ်နီးချင်း (ဘာသာတူ ဘာသာကွဲ) မှာ စားစရာမရှိလျှင် ကိုယ့်အိမ်ကပေးကမ်းရသည်။ သူဌေးများသည် တစ်နှစ်လျှင် အပိုပိုင်ဆိုင်မှု၏ ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒါနကြေးအဖြစ် လှူရသည်။ သူတပါးအဖို့ပေးကမ်းလျှင် မိမိကြိုက်တာကိုပဲပေးရသည်။ ကိုယ်တိုင် မကြိုက်တာကို လက်ဆောင်အဖြစ် သူများအဖို့ မပေးရ။ အရက်၊ လောင်းကစား၊ ဝက်သား၊ သွေး၊ ပြည့်တန်ဆာ၊ မူးယစ်ဆေး၊ စသည်တို့ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ခွင့်မရှိသလို စီးပွားရေးအဖြစ်လည်း သူတပါးတို့အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိ။ အတိုးပေးခြင်း၊ ယူခြင်းကို တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ မလွှဲမရှောင်သာ၍ ဘဏ်မှ အတိုးငွေရရှိပါက ကုသိုလ်မမျှော်ကိုးမရည်စူးဘဲ ပေးလှူလိုက်ရန် ဆုံးမထားသည်။ အစားကျူးခြင်းခွင့်မပြု၊ စားပိုင်ခွင့်ရှိသည့် သားကောင်များမှလွဲ၍ ကျန်သတ္တဝါများကို စားသုံးခြင်းခွင့်မပြုသဖြင့် ရှားပါးတိရစ္ဆာန်များ၏ မျိုးဆက်ကို ကာကွယ်ရာရောက်သည်။ တွေ့မရှောင်စားသည်ဆိုခြင်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့တွင်မရှိ။ ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ရန် လူအများကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မကောင်းမှုများကို ရှောင်ရန် ပိတ်ပင်တားမြစ်ရမည်။ အကယ်၍ အစိုးရသည် မကောင်းမှုများကို တရားဝင်အဖြစ် ခွင့်ပြုထားပါကလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကတော့ ရှောင်ရှားရမည်အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သူတော်စဉ်များသည် နေ့တဓူဝကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ကို တစ်နေ့လျှင် နှစ်သောင်းငါးထောင် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇာယ်ကြသည်။ ညအခါ လူအများအိပ်ကောင်းချိန် သန်းခေါင်ကျော် သုံးနာရီခွဲလောက်မှာထ၍ နေ့ပိုင်းဝတ်ပြုသကဲ့သို့ ဝတ်ပြုကြသည်။
မိတ်ဆွေ………… အစ္စလာမ်သာသနာ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများနှင့် မပွင့်လင်းမမြင်သာမှုများကို သိရှိပြီးပါက သင့်မိတ်ဆွေများကိုလည်း ပြောပြခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူပါ။
This entry was posted on August 12, 2013 at 11:25 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.